vendredi, 04 mai 2018 00:09
Toamasina: Liberté de la presse
Toamasina: Liberté de la presse AVANT - APRES
jeudi, 03 mai 2018 22:26
Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-010 relative à l’élection des Députésà l’Assemblée nationale
Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle,
jeudi, 03 mai 2018 22:24
Vu la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981 ;
Vu la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 ;
Vu la loi n°2015-020 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales (CENI) ;
jeudi, 03 mai 2018 19:45
Fianarantsoa: Fankalazana ny 3 mey
Nisafidy ny antsoina hoe: "Journalisme d'investigation" ny fikambanan'ny mpanao gazety sy mpiserasera eto Fianarantsoa (AJCF), mba ho fanamarihana ity andro iraisam-pirenena ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety ity.
Mpandahatra avy eto an-toerana sy avy any an-drenivohitra no nitondra ny fomba fijeriny tao anaty famelabelaran-kevitra arahana fanontaniana teo amin'ny Zomatel Anjoma ity tolakandro ity.
Eo ny filoha mitarika ny AJCF, Andry Rasamy sy i Fah Andriamanarivo, izay mpanao gazety tonian-dahatsoratra eo amin'ny MaTV. Miahy ny fotoana teto ny talem-paritry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana, nanatrika ireo mpisehatra sy olontsotra ary mpianatra eny amin'ny oniversite.
jeudi, 03 mai 2018 19:44
Ambalavao Tsienimparihy: Vono olona ambonivohitra
Mpandraharaha amin'ny fivarotana kojakoja fanorenana trano sy fampiasa andavanandro no namoy ny ainy omaly hariva teto an-tampotananan'Ambalavao. Ny marain'ity alakamisy 3 mey ity vao hita ny razana.
Tao an-trano fonenany no nitrangan'ny herisetra nalahavo azy. Ambaran'ireo mponina mitatitra ny zava-nisy fa izy irery no tao an-toerana ary lasan'ny mpanafika ny vola voatahiry tamin'izany.
jeudi, 03 mai 2018 17:39
Asa fanaovan-gazety: “Soraty amin’ny teny malagasy halalaka tsara, fa aza mihambo !”
Nanjary lanonam-panjakana ny fankalazana nasionaly ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, natao teto Toamasina androany 3 mey 2018. Isany nanamarika izany ny fitokanana tsangambato teo amin’ny Araben’ny fahaleovantena.
Rakotra hadisoana ny soratra amin’ny teny frantsay noraketina ho tadidy amin’ilay takelaka eo amin’ilay tsangambato vao notokanana. Ny olontsotra mandalo indray no tsy mihambahamba milaza fa “Soraty amin’ny teny malagasy halalaka tsara, fa aza mihambo”.
Mety fomban-javatra ny fanaovana fahadisoana, fa mila arahi-maso ny asa toy itony, ary mila manitsy raha sendra misy ny adisoana.
jeudi, 03 mai 2018 16:56
Mahajanga: Nanamarika ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety
Niavaka ny fanamarihana ny andro manerantany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety teto Mahajanga. Diabe namakivaky ny tanàna niaraka tamin'ny fanamiana fotsy niainga teo anoloan'ny Lapan'ny Tanàna no nanombohana ny hetsika izay namantana avy hatrany teny amin'ny “bord de la mer”. Nisy avy eo ny fanadiovana io toeram-pitsangatsanganana mampalaza an'i Mahajanga io niarahan'ireo rehetra tonga nanamarika ny 3 mey.
Ankoatra ny mpanao gazety am-perinasa sy ny mpanao gazety zokiolona, ny manampahefana, notarihin'ny prefen'i Mahajanga sy ny lehiben'ny faritra Boeny ary ny Ben'ny Tanànan'i Mahajanga ary ireo lehiben'ny sampandraharaham-paritra aty an-toerana.
Maro ireo olom-pirenena tonga nanotrona ny hetsika, olom-pirenena tonga saina amin'ny maha zava-dehibe ny haino aman-jery sy ny asa fanaovan-gazety.
jeudi, 03 mai 2018 11:07
Antsalova: Mpianaka 2 maty notifirin’ny dahalo
Nidiran’ny dahalo tao Ambolatera, Fokontany iray eto Antsalova tampon-tanàna omaly alarobia 2 mey 2018, tokony ho tamin’ny 7ora hariva. Nagalatra omby miisa 8 ireo dahalo izay tsy fantatra ny isany. Nitifitra ireo dahalo ka nahafaty mpianaka 2 sy nandratra olona 3.
Marihina fa ankoatry ny fisian'ny Brigadin’ny Zandarimaria sy Commissariat de Police eo an-tampon-tanàna, dia vao nahazo vata-miaramila 11 koa i Antsalova vao vetivety.
Tsy nisy ny fanarahan-dia omaly, fa androany maraina vao nanao pai-by ny fokonolona mba ho fanairana ny rehetra.
jeudi, 03 mai 2018 11:00
Indostria: Fototry ny toe-karena
Resahina foana ny antsoina hoe fitomboan'ny harikarena, na ilay hoe taux de croissance.
Inona moa izy io, ary mampitombo ny vary miditra anaty vilia ve izany? Lazaina fa tokony à deux chiffres ny tahan'ny harikarena vao ho tsapa any antokan-trano izany?
Raha hiverenana kely, dia nivelona tamin'ny fihazana, fanjonoana, ary fihotazana ny olona fahiny. Izany hoe, izay vokatra nisy teo ambony tany, naniry, biby ary trondro, no nohanina sy nivelomana.
Dia rehefa lany ilay sakafo teo dia nifindra toerana hafa nitady izay azo nohanina.
Taty aoriana anefa, nanomboka niadivan'ny vondron'olona izay nitambatambatra ny toerana tsara, ary niha ritra ihany koa ireo zavatra azo notazana sy nohazaina, ka tsy ampy satria nitombo ny isan'ny olona. Tao koa no reraka sy maty amin'ilay mifindra lava, ka nanomboka namboly sy niompy.